Xisbiga Udub oo Sheegay in Doorashadii Somaliland Lagu Shubtey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xisbiga Udub oo Sheegay in Doorashadii Somaliland Lagu Shubtey
Xisbiga Udub ee Somaliland ayaa durba soo saarey cabasho ku aadan doorashadii ka dhacdey Somaliland, Shir jaraa’id ay ku qabteen magaalada Hargeysa Xoghayaha Guud ee Xisbiga Usudb Jaamac Yaasiin iyo Guddoomiyaha Ololaha doorashada ee Udub Cismaan Hindi, ayey ka soo saareen cabashada iyo digniin ku aadan in lagu dhawaaqo natiijada.
Shirka jaraa’id ayey ku sheegeen in doorashada si badheedh ah loogu shubtey isla markaana waxa ay calaamadiyeen goobo gaar ah oo ku shubashadu ay ka dhacdey, waxaana ka mid ah goobaha la musuqmaasuqay doorashada sida ay hadalka ay u dhigeen magaalada Gebiley, xaafado ka mid ah Hargeysa sida 26 Juun iyo Xaafadda Ibraahim Koodbuur, Magaalada Caynaba, Ceel Afweyn iyo Gar’adag.
Xisbiga Udub ayaa digniin u direy Komishinka doorashooyinka waxaana ay uga digeen in ay soo saraan natiijo hordhac ah, haddii aan wax laga qaban cabashadooda, waxaana ay sheegeen in ay keeni karto cawaaqib xumo.
Inta badan dalalka Africa ee doorashooyinku ka dhacdo waxaa cabashada ugu badan ka timaadaa xisbiyada mucaaradka ah ee aan talada hayn markaas, waxaana ay tani noqoneysaa markii u horeysey ee xisbigii talada hayey ka cabto in lagu shubtey doorashada.
Dhanka kale waxaa doorashada amaaney goobjoogayaashii caalamka ka socdey, inkasta oo ay sheegeen in gobolka Awdal ay ka dhacdey ku noq noqosho, iyo weliba in ay codkooda dhiibteen caruur yaryar.
Si kastaba ha ahaatee waxaa la isweydiinayaa cabashada ka soo yeertey xisbiga talada haya ee Udub halka ay salka ku hayso, waxaana jira warar la isla dhexmaraayo kuwaas oo sheegaya in xisbiga Udub doorashada looga adkaadey.
Xisbiyada Somaliland ayaa horey u balan qaadey in ay u hoggaansamayaan natiijada doorashada, haddii Udub ku adkeysto in doorasho xalaal ah dhicin, ayaa mugdi gelin karta halka Somaliland u dhaqaaqdey.